REGINA ဂျော့ခ်ျ၏ ၀ တ်စုံအားလုံးသည်အနည်းဆုံးမှအများဆုံးရွေးယူကြသည် - သတင်း
အဆင့်: အနည်းဆုံးကနေအများဆုံးဆွဲယူဖို့ Regina ဂျော့ခ်ျရဲ့မတ်မတ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်း
တစ် BJ ပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
သူမ၏ဟယ်လိုဝတ်စုံနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့ရဲ့မတ်မတ်အဘို့အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှမိန်းကလေးရဲ့လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်သမိုင်း၌ဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ သူမ၏ cardigans, hoops နှင့်နည်းနည်းအိတ်ပေါ်ရာအရပျထဲကဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ Instagram ဒီနေ့ ကျောရိုးသတ္တိကိုဝတ်ဆင်နေစဉ်ပန်းရောင်ဖဲကြိုးမဲ့ကြိုးမဲ့အ ၀ တ်အစားကိုဘယ်သူမှမချွတ်နိုင်ဘူး။
အစဉ်မပြတ်ငါသူမမတ်မတ်တိုင်းရိုက်, ထင်ပေမယ့်သန်းပေါင်းများစွာအကြိမ်ရုပ်ရှင် rewatching, ငါသူမ၏အဝတ်အစားအများကြီးအမှန်တကယ်အမှတ်အသားလွဲချော်သဘောပေါက်လာတယ်။ တကယ်တော့ Gretchen သည်ပလတ်စတစ်များမှအကောင်းဆုံးဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ အဲဒီမှာငါကဆိုပါတယ်။
သို့သော်သင်တန်း၏ Regina သည်အထွsup်အမြတ်အာဏာကိုအမြဲတမ်းအုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။ သူမ၏ဝတ်စုံအချို့သည်အမှန်တကယ်ပင်ဆွဲဆောင်မှု၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သော်လည်းအချို့ကမူသူမကိုနေ့လယ်စာစားပွဲ မှနေ၍ သင့်အားနှင်ထုတ်လိမ့်မည်။
ဤသည် Regina ဂျော့ခ်ျ၏အင်္ကျီများကိုတစ်ခုတည်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်အနည်းဆုံးမှအများဆုံးရယူရန်အထိ:
သူမ၏နောက်ဆုံးမတ်မတ်တစ် ဦး အလွယ်တကူအဆိုးဆုံးသည်အဘယ်မှာရှိရုပ်ရှင်ရဲ့အဆုံးမှာစတင်ကြပါစို့။ ငါကအားကစားပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တာကိုသူသိတယ်၊ ဒါကြောင့်သူမ ၀ တ်တာကိုရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူး၊ ဒါဟာငါ့ထံမှကြီးမားတဲ့အဘယ်သူမျှမပါပဲ
အဆိုပါလုပ်နေတာ Cady ရဲ့ဆံပင်မတ်မတ်
သူတို့အားလက်မောင်းပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများဘာတွေလဲ ?? ကျွန်တော်မှာစကားလုံးမရှိဘူး
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Regina တွင်နောက်ဆုံးတွေ့ရသည့် ၀ တ်စုံဖြစ်ပြီးသူမ၏အသွင်ပြောင်းမှုကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်သည်။ ထိုအကကျိန်းသေပါဘူး, ပျင်းစရာကောင်းတယ်မှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်ဒါ Regina un ။ ကြီးမားသောကွင်းများသည်ဟောင်းသော Regina ၏အရိပ်အမြွက်ဖြစ်သော်လည်း။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်သူမ၏တစ်ခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။
ငါသူတို့အကြီးမြတ်ဆုံးတီထွင်မှုများထဲမှင်နှင့် Cady သူတို့အားသူတို့အားKälteenအရက်ဆိုင်လိမ်ကျော်လွန်သည်, ဒါပေမယ့်ဒီ tracksuit အဆိုးဆုံးဖြစ်ပါတယ်သူမ၏ကျွေးမွေး sweatpants ဆန့်ကျင်ဘာမျှမရှိသည်။ အရောင်၊ အနောက်ဘက်ရှိအစင်းများနှင့်အပေါ်ဖက်ရှိအကျီများအောက်သို့ဆွဲတင်လိုက်သည်။ Ew
ဒီကျပန်းအပြာနှင့်အနက်ရောင် Jumper ကြည့်ရှုပါ
ဒီအင်္ကျီကိုတစ်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်သာမြင်ရပေမယ့်နှစ်ထပ်အလွှာကိုကျွန်တော်ကိုင်တွယ်ရ ဦး မှာပါ။ ဒါဟာကိုယ့်ဒါပျင်းစရာကောင်းပြီး Un Regina ပါပဲ။ သူမသည်သူမ၏ R ကိုလည်ဆွဲရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါလျှင်ငါကသူမဖြစ်ခဲ့သည်သိကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကောင်းပြီငါကျိန်းသေဒီမတ်မတ်နှင့်အတူစွဲလမ်းဘူး။ လက်ရှည်ထိပ်များကဘာလဲ? ၎င်းသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကဖက်ရှင်လောကတွင်ဆိုးဝါးသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုသက်သေပြခဲ့သောဥပမာများစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Gretchen ကို Prom ဘုရင်ဝတ်စုံအတွက်လျာထားသည်
နောက်တဖန်သူတို့သည်ရှည်လျားသောလက်ထိပ်များနှင့်ခရမ်းရောင်အရောင်များကိုသူတို့သူမ၏ထဲမှာထည့်သွင်းဘာတွေလုပ်နေလဲ? နှင့်ဘရာစီယာကြိုး, အေးမြသောပုံစံနေစဉ်, ရုံထူးဆန်းထွက်ဆွဲကြည့်လိုက်တယ်, သူမ၏ပခုံးရှင်းလင်းသောသွားပါစေ။
အခုတော့သိသာသူမ၏မိခင်မြင်ကွင်းတစ်ခုခိုးယူ, ဒါပေမယ့် Regina ရဲ့မတ်မတ်တစ် ဦး ပြီးပြည့်စုံသော hookup ကြည့်ရိုးရှင်းတဲ့တိုတိုနှင့်ပလတ်စတစ် Vibe ၏ပို။ ကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်လက်မောင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်တွင် Regina ဂျော့ဂ်ျသည်ပန်းနုရောင်ဖိညှပ်ဖိနပ်များဝတ်ဆင်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောအမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့ ၀ တ်စုံကနည်းနည်းလေးသေးတယ်၊
အဆိုပါ Burn စာအုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမတ်မတ်
သင်ယခုနှစ်အကြီးမားဆုံး bombshell ကိုပခုံး Jumper နှင့်ပန်းရောင်အိတ်တစ်ချောင်းထက်ပိုပေးဆပ်ရန်ဘာတွေလိုသေးလဲ။ ဒီမတ်မတ်၏အောက်ပိုင်းတစ်ဝက်သော်လည်းဆိုးရွားသည်။ အနိမ့်မြင့်မြင့် bootleg ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အလွန်ပါးလွှာသောဖိနပ်ဟောင်းကြီးတွေအဘယ်သူမျှမဖြစ်ကြသည်။
ဤတွင် AND အားကစားမတ်မတ်
ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့ Regina တွင်ပထမဆုံးမြင်ရခြင်းဖြစ်ပြီးဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PE ပစ္စည်းများနှင့်အဘယ်သူမျှမတူပါ။
ဆံပင် sexy တွန်းကြည့်ပြန်တွန်းလှပါတယ်
Regina ဟာအနီရောင်နဲ့ကြည့်လို့ကောင်းပြီးပန်းရောင်အသေးစိတ်ကတော့ Jumper ကိုအနည်းငယ်မြှင့်တင်ပေးသည်။ အိုးနှင့်အာရုန်၏ဆံပင်ပြန်တွန်း၏စုစုပေါင်းပါဝါပြောင်းရွှေ့အထင်ကရဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဤသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ရိုးသားနေပါကအေးခဲ။ အရည်ရွှမ်းသည့်အရည်ရွှမ်းသည့် Couture မိတ္တူ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်း၏ဝတ်စုံအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ Regina ကတကယ်တော့သူမရဲ့ဆံပင်တွေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အလှအပကလူတိုင်းရဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်သင့်တယ်။
ဤပုံကိုသင်လျင်မြန်စွာကြည့်မည်ဆိုလျှင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ဖြစ်သော်လည်းအနီးကပ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှုအရကရင်နှင့်ဂရက်ချန်သည် ပို၍ ကောင်းမွန်သောဝတ်စားဆင်ယင်မှုကိုရရှိသည်။ Gretchen သည်နွေရာသီအားလပ်ရက်အ ၀ တ်အစားတွင် ၀ တ်ဆင်ထားပြီးကရင်တွင်ဆောင်ပုဒ်ရှိသည်။ သို့သော် Regina ၏မတ်မတ်နည်းနည်းပျင်းစရာပါပဲ။ သူမအိတ်ကကောင်းပါတယ်
ဒါဆိုမင်းသဘောတူလား မင်းကမင်းကိုအရမ်းချစ်တယ်လို့ထင်လား ကြည့်ပါ
အနက်ရောင်နှင့်ပန်းရောင်အရောင်ပေါင်းစပ်မှုသည် Regina တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်၊ သို့သော်ထိုကော်လာသည်မိုက်မဲစွာကြီး။ ကြီးမားသည်။
အဆိုပါ Boob ထွက်ခုတ်ဖြတ်
၎င်းသည်အိုင်ကွန်အနေအထားအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသာမြင့်တက်စေသည်။ ဒီမတ်မတ်မှာ Regina သာကြည့်ကောင်းတယ်
ငါ Regina အနီရောင်ကောင်းသောကြည့်နောက်တဖန်ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒီထိပ်တန်းတစ်ခုလုံးကဒီဟာကိုပဲငါဒီနေ့ဝယ်မယ်။ အတူတကွချည်နှောင်ဖို့လေးလေးနှင့်အတူဒီကဗျာအနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်အလှအပဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဒေါသ puffer အင်္ကျီကိုကြည့်
ဒါပေမယ့်ဒီကြည့်တာကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါ။ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ မာ့ခ်ျအင်္ကျီ၊ Lacy top နှင့်ဒေါက်ဖိနပ်များသည်လွယ်ကူသောအင်အားမရှိသော combo တစ်ခုဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်စကားပြောကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်းကဒီမတ်မတ်ကိုသိတယ်။ ဒါဟာအလွယ်တကူ Regina ရဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်ပေမယ့်သူမဝတ်ထားတစ် ဦး တည်းသာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဆွဲဆောင်မှုအများဆုံးအဆင့်ကိုမထားဘူး။
ပထမ ဦး ဆုံးဖုန်းခေါ်မတ်မတ်
Regina ဂျော့ခ်ျ မှလွဲ၍ အခြားသူသည်ညဝတ်အင်္ကျီအင်္ကျီအစရှိသည်။ သူမရဲ့လည်ဆွဲနဲ့အတူ R နှစ်ဆအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမရဲ့ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ သူမဘရာစီယာကြိုးပေါ်ရှိလိပ်ပြာများသည်စိမ်းလန်းစိုပြည်သည်။
တစ် ဦး ကဖြောင့်တက်ဒဏ္legာရီ။ ၎င်းသည်အ ၀ တ်အစားများ၏အခြေခံအကျဆုံးခွေးဖြစ်သော်လည်းသူမအလုပ်ကိုသာလုပ်သည်။ ဒါက cuffy cuffs လို့ထင်ပါတယ်။
ပန်းရောင် cardigan၊ အနက်ရောင်စကတ်၊ ဆောင်ပုဒ်ထိပ်၊ ကန ဦး လည်ဆွဲနှင့်ပန်းရောင်အိတ် - စားဖိုမှူးရဲ့အနမ်းပဲ။
• ရှုံးနိမ့်သူကို ၀ င်ပါ။ သင်မည်သည့် Mean Girls ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုကြည့်ရှုရန်ဒီဉာဏ်စမ်းပဟေtakeိကိုယူပါ
• အကယ်၍ သင်သည်ဤမိန်းကလေးများအတွက်ပဟေ14ိစာမေးပွဲတွင် ၁၄/၁၅ ရလျှင်မိမိကိုယ်ကိုဆွဲခေါ်နိုင်သည်
•မဲပေးခြင်း - ဘယ်သူ့ကိုမှအထင်ရှားဆုံးဆယ်ကျော်သက်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကဘယ်သူလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်